ग्यास लिक हुँदा दिदीबहिनीको मृ’त्यु ! - Nepal Insider
ग्यास लिक हुँदा दिदीबहिनीको मृ’त्यु !
January 20, 2020 636
काठमाडौं। १७ र २४ वर्षका दुई दिदीबहिनीको मृ’त्यु कथित रुपमा बाथरुममा ख’तरनाक ग्यास लि’क भएका कारण भएको छ । यो घ’टना पाकिस्तानको पंजाब प्रान्तको दौलत नगरको हो । बेलायती मिडिया मिररका अनुसार दुवै दिदी बहिनी बेलायती नागरिक हुन् र उनीहरु आफ्ना हजुरबुवाको पु’ण्यतिथिको अवर पारेर पाकिस्तान आएका थिए ।समाचारमा जनाइएअनुसार बाथरुममा गि’जरबाट ग्यास लि’क भएका कारण २४ वर्षकी मारिया र १७ वर्षकी नादिरा रहमानको मृ’त्यु भएको हो । दुवै घरको भुइँमा लडेको अवस्थामा भेटिएका थिए ।
१२ जनवरीमा भएको मृ’त्युको समाचार अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा अहिले मात्र आएको हो । पाकिस्तानी अधिकारीहरुले घ’टनाको जाँ’च भइरहेको बताएका छन् ।पो’ष्टमार्टम रि’पोर्टसँग सम्बन्धित जानकारी अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । पाकिस्तानी मिडियाका अनुसार अ’भिभावकले दुवै दिदीबहिनीको मृ’त्यु दु’र्घटनामा भएको मानेका छन् र का’नुनी का’रवाहीबारे विचार गरिरहेका छन् । पाकिस्तानमा रहेका यी दिदीबहिनीका आफन्त भने घ’टनाको कै’यौं दिन भइसक्दा समेत यस विषयमा कुरा गर्नबाट पछि ह’टिरहेका देखिएका छन् ।
आ’फन्तले यस विषयमा कुरा गर्न न’मानेपछि सामाजिक संजालमा विभिन्न ह’ल्ला फै’लिएका छन् । केहीले भने यी दिदीबहिनीको ‘अ’नर कि’लिङ’ (प्र’तिष्ठा जो’गाउन परिवारबाटै ह’त्या) भएको मानेका छन् । यी दिदीबहिनीकी सौ’तेनी आमाले भने आ’रोप अ’स्वीकार गरेकी छिन् । बेलायतको शे’फिल्डमा बस्ने दिदीबहिनीका छिमेकीले भने दिदीबहिनीको मृ’त्यु भएको थाहा पाएको तर मृ’त्युको कारण स्पष्ट नभएको बताएका छन् ।
Prevआज नेपाली बजारमा यस्तो छ सुन-चाँदीको भाउ
Nextजव आफ्नै श्रीमानले जीवनभर नभुल्ने पिडा दिए, रुँदारुँदै अन्तर्वार्ता नै सकियो (भिडियो)
अब अमेरीकाले नेपाली कामदार लैजाने, यस्तो छ प्रक्रिया
दक्षिण कोरियामा एक वर्षमा तीन लाख रोजगारी सृजना
घरमा सुतिरहेको मेरो श्री`मानलाइ लगेर नि´र्मम ह त्या गर्नेलाइ सभामुख बनाए : मैले न्या,य पाउन अब कहाँ जाने ?